1) Magnetron sputtering မူအရ.
ပေါက်နေသော ပစ်မှတ်တိုင်တွင် (cathode) နှင့် orthogonal သံလိုက်နှင့်လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ ထပ်တိုးမှုကြားရှိ anode, လိုအပ်သော inert gas နှင့်ပြည့်နေသော high vacuum chamber တစ်ခုတွင် (များသောအားဖြင့် Ar gas ပါ), အမြဲတမ်းသံလိုက်သည် ပစ်မှတ်ပစ္စည်း မျက်နှာပြင်တွင် သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖွဲ့စည်းသည်။ 250 ~ 350 gauss, မြင့်မားသောဗို့အားလျှပ်စစ်စက်ကွင်းနှင့်အတူ orthogonal လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းဖွဲ့စည်းရန်. လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်, Ar ဓာတ်ငွေ့ကို အပြုသဘောဆောင်သော အိုင်းယွန်းနှင့် အီလက်ထရွန်များအဖြစ် အိုင်ယွန်များ ထုတ်ပေးသည်။, ပစ်မှတ်ကို အနုတ်လက္ခဏာမြင့်မားသော ဗို့အားတစ်ခုဖြင့် ပေါင်းထည့်သည်။, ပစ်မှတ်မှ အီလက်ထရွန်များသည် သံလိုက်စက်ကွင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး အလုပ်လုပ်သော ဓာတ်ငွေ့များ တိုးပွားလာခြင်း၊, မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆပလာစမာကို cathode အနီးတွင်ဖွဲ့စည်းသည်။, Ar ion များသည် Lorentz force ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် အရှိန်မြှင့်ကာ ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်ဆီသို့ ပျံသန်းသွားကြသည်။, ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်ကို အလွန်မြင့်မားသော အရှိန်ဖြင့် ဗုံးကြဲသည်။, ပစ်မှတ်မှ ထွက်ကျလာသော အက်တမ်များသည် အရှိန်အဟုန်မြင့်မြင့်ဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းနိယာမကို လိုက်နာစေရန် ပစ်မှတ်ပေါ်ရှိ ကွဲထွက်နေသော အက်တမ်များသည် အရွေ့စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနိယာမကို လိုက်နာကာ ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်မှ ဖလင်တစ်ခုထည့်ရန် မြေအောက်စထရိဆီသို့ ပျံသန်းသွားကြသည်။. Magnetron sputtering ကိုယေဘူယျအားဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲထားသည်: DC sputtering နှင့် RF sputtering, DC sputtering equipment ၏ နိယာမသည် ရိုးရှင်းပြီး သတ္တုများကို sputtering လုပ်သောအခါတွင် မြန်သည်။. RF sputtering, သို့သော်ငြားလည်း, ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအပြင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သောပစ္စည်းများကိုဖျတ်ထုတ်နိုင်သည်။, အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သော ဒြပ်ပေါင်းပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်မှုအတွက် ဓာတ်ပြုမှု sputtering များ, nitrides နှင့် carbides. RF ကြိမ်နှုန်း တိုးလာပါက microwave plasma sputtering ဖြစ်လာသည်။, ဒီနေ့, အသုံးများသောအရာများမှာ electron cyclotron resonance ဖြစ်သည် (ECR) အမျိုးအစား microwave microwave sputtering.
2) magnetron sputtering ပစ်မှတ်အမျိုးအစားများ.
သတ္တု sputtering အပေါ်ယံပိုင်းပစ်မှတ်, alloy sputtering coating ကိုပစ်မှတ်ထားသည်, ceramic sputtering coating ပစ်မှတ်, boride ceramic sputtering ပစ်မှတ်, carbide ceramic sputtering ပစ်မှတ်, fluoride ceramic sputtering ပစ်မှတ်, nitride ကြွေထည်ပစ်မှတ်, အောက်ဆိုဒ်ကြွေပစ်မှတ်, selenide သည် ceramic sputtering ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်, silicide ceramic sputtering ပစ်မှတ်, sulfide ceramic sputtering ပစ်မှတ်, telluride ceramic sputtering ပစ်မှတ်, အခြားကြွေပစ်မှတ်များ, ခရိုမီယမ်-ဒပ်ဆီလီကွန်အောက်ဆိုဒ် ကြွေထည်ပစ်မှတ်များ (Cr-SiO), indium phosphide ပစ်မှတ် (InP), arsenide ပစ်မှတ်များကို ဦး တည်သည် (PbAs), indium arsenide ပစ်မှတ် (အမျှ). 
ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ, ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများ၏နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသည် ရေစုန်အောက်ပိုင်းအပလီကေးရှင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပါးလွှာသောရုပ်ရှင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။, အက်ပလီကေးရှင်းလုပ်ငန်းသည် ပါးလွှာသော ဖလင်ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများတွင် နည်းပညာကို တိုးတက်စေသည်နှင့်အမျှ၊, ပစ်မှတ်ပစ္စည်းနည်းပညာသည်လည်းပြောင်းလဲသင့်သည်. ဥပမာ, အိုင်စီထုတ်လုပ်သူများ. မကြာသေးမီအချိန်များတွင် ခံနိုင်ရည်နည်းသော ကြေးနီဝါယာကြိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။, လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း မူလအလူမီနီယမ်ဖလင်ကို သိသိသာသာအစားထိုးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။, သို့မှသာ ကြေးနီပစ်မှတ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်သော အတားအဆီးအလွှာ ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် အရေးတကြီး လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။. ဖြည့်စွက်ကာ, မကြာမီနှစ်များအတွင်းက, flat panel display ပါ (FPD) မူလ cathode ray tube ကိုသိသိသာသာအစားထိုးခဲ့သည် (CRT) ကွန်ပြူတာ မော်နီတာ နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ဈေးကွက်ကို အခြေခံသည်။. ITO ပစ်မှတ်များအတွက် နည်းပညာနှင့် စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုလည်း သိသိသာသာ တိုးစေမည်ဖြစ်သည်။. ဖြည့်စွက်ကာ, သိုလှောင်မှုနည်းပညာ၌. သိပ်သည်းဆမြင့်သည်။, စွမ်းရည်မြင့် hard disk, high-density rewritable optical disc ဝယ်လိုအားသည် ဆက်လက်တိုးလာသည်။. ၎င်းတို့အားလုံးသည် ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးချပရိုဂရမ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။. အောက်ဖော်ပြပါတွင် ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများ၏ အဓိကအသုံးချဧရိယာများကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။, နှင့် ဤဒေသများရှိ ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း.
ဆီမီးကွန်ဒတ်တာစက်မှုလုပ်ငန်းသည် မည်သည့်အပလီကေးရှင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပစ်မှတ် sputtering ရုပ်ရှင်များအတွက် အလိုအပ်ဆုံး အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။. ဒီနေ့, ဆီလီကွန် wafers အထိ 12 လက်မ (300 epitodes) ထုတ်လုပ်ကြသည်။. အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများ၏ အကျယ်သည် လျော့ကျနေချိန်တွင်၊. ကြီးမားသောအရွယ်အစားများအတွက်ဆီလီကွန် wafer ထုတ်လုပ်သူများ၏လိုအပ်ချက်များ, မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်, ခွဲခြားမှုနည်းသော စပါးကောင်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သည့်ပစ်မှတ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသေးစားဖွဲ့စည်းပုံရှိရန် လိုအပ်သည်။. ပစ်မှတ်၏ ပုံဆောင်ခဲအမှုန်အချင်းနှင့် တူညီမှုကို ဖလင်၏ အစစ်ခံနှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့် အဓိကအချက်အဖြစ် ဖော်ထုတ်ထားသည်။. ဖြည့်စွက်ကာ, ရုပ်ရှင်၏ သန့်ရှင်းမှုသည် ပစ်မှတ်၏ သန့်ရှင်းမှုပေါ်တွင် အလွန်မူတည်ပါသည်။. ယခင်တုန်းက,a99.995% (4N5) ကြေးနီစစ်စစ်ပစ်မှတ်သည် 0.35pm လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာထုတ်လုပ်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။, သို့သော် ယနေ့ 0.25um လုပ်ငန်းစဉ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။, 0.18um မှာနေစဉ်} အနုပညာ သို့မဟုတ် 0.13m လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပင် တိုင်းတာခြင်းမပြုဘဲ ပစ်မှတ်၏ သန့်စင်မှု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။5သို့မဟုတ် 6N သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည်။. ကြေးနီသည် အလူမီနီယမ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။, ကြေးနီသည် electromigration ကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးတွေ့ဆုံရန်ခုခံနိုင်မှုနည်းပါးသည်။! conductor လုပ်ငန်းစဉ်သည် 0.25um အောက်တွင်ရှိသော sub-micron ဝါယာကြိုးများ လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းနှင့်အတူ အခြားပြဿနာများကိုပါ သယ်ဆောင်လာပါသည်။: အော်ဂဲနစ်ဒိုင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ကြေးနီ၏ ခံနိုင်ရည်အား နည်းပါးသည်။. တုံ့ပြန်ရန်လွယ်ကူသည်။, chip ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ရလဒ်ကြေးနီအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလိုင်း corroded နှင့်ကျိုးပဲ့. ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့, ကြေးနီနှင့် dielectric အလွှာအကြား အတားအဆီးအလွှာတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည်။. အလွှာပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ယေဘူယျအားဖြင့် အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားစွာ အသုံးပြုကြသည်။, သတ္တုနှင့်၎င်း၏ဒြပ်ပေါင်းများ၏ခံနိုင်ရည်မြင့်မား, ထို့ကြောင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအလွှာ၏အထူသည် 50nm ထက်နည်းသည်။, ကြေးနီနှင့် ဒိုင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ကပ်ငြိမှု စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်သည်။. ကြေးနီ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုနှင့် အလူမီနီယမ် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ပိတ်ဆို့ခြင်း အလွှာပစ္စည်း ကွဲပြားသည်။. ရည်မှန်းထားတဲ့ ပစ္စည်းအသစ်တွေ တီထွင်ဖို့ လိုတယ်။. Ta အပါအဝင် ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းအလွှာ၏ ကြေးနီ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု, ဒဗလျူ, TaSi, Wsi, စသည်တို့. ဒါပေမယ့် Ta, W သည် သတ္တုဓာတ်များဖြစ်သည်။. ထုတ်လုပ်မှုက အတော်လေးခက်ခဲတယ်။, အခု molybdenum ကို လေ့လာနေပါတယ်။, ခရိုမီယမ်နှင့် အခြား ထိုင်ဝမ်ရွှေများကို အစားထိုးပစ္စည်းများအဖြစ်.
ပြားချပ်ချပ်ပြသမှု (FPD) ကွန်ပြူတာမော်နီတာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဈေးကွက်အပေါ် နှစ်များအတွင်း သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။, အဓိကအားဖြင့် cathode ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြွန်ပုံစံ (CRT), ၎င်းသည် ITO ပစ်မှတ်များအတွက် နည်းပညာနှင့် စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုလည်း တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။. ယနေ့ရရှိနိုင်သော iTO ပစ်မှတ် နှစ်မျိုးရှိသည်။. တစ်မျိုးမှာ နာနိုပြည်နယ် အင်ဒီယမ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် သံဖြူအောက်ဆိုဒ် အမှုန့်ကို ရောစပ်ပြီး သန့်စင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။, တစ်ခုက indium သံဖြူအလွိုင်းပစ်မှတ်ကိုအသုံးပြုသည်။. Indium-tin alloy ပစ်မှတ်များကို DC reactive sputtering ဖြင့် ITO ပါးလွှာသော ရုပ်ရှင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။, သို့သော် ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်သည် အောက်ဆီဂျင် ထွက်လာပြီး sputtering rate ကို ထိခိုက်စေပါသည်။, ထိုင်ဝမ်ရွှေပမာဏကြီးမားသော ပစ်မှတ်များရရှိရန် မလွယ်ကူပါ။. ယခုခေတ်, ITO ပစ်မှတ်များထုတ်လုပ်ရန် ပထမနည်းလမ်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးသည်။, L ကို အသုံးပြု}IRF ဓာတ်ပြုမှု sputtering အပေါ်ယံပိုင်း. ၎င်းသည် လျင်မြန်သော အပ်နှံမှုအမြန်နှုန်းရှိသည်။. ဖလင်၏အထူကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။, conductivity မြင့်မားသည်, ရုပ်ရှင်၏ ညီညွတ်မှုကောင်းသည်။, နှင့် substrate ကို ခိုင်ခံ့သော တွယ်တာမှု, စသည်တို့. ဌ. ဒါပေမဲ့ ပစ်မှတ်က ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးမှာ အခက်အခဲရှိတယ်။, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အင်ဒီယမ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် သံဖြူအောက်ဆိုဒ်တို့သည် ပေါင်းစပ်ရန် မလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။. ZrO2, Bi2O3 နှင့် CeO တို့ကို sintering additives များအဖြစ် ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး သိပ်သည်းဆရှိသော ပစ်မှတ်များကို ရယူနိုင်သည်။ 93% သို့ 98% သီအိုရီတန်ဖိုး. ဤနည်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ITO ရုပ်ရှင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဖြည့်စွက်စာများပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။. ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်များသည် Bizo ကို ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။, Bi2O3 သည် 820Cr တွင် အရည်ပျော်ပြီး sintering အပူချိန် l500°C ထက် ကျော်လွန်၍ မငြိမ်မသက်ဖြစ်သွားသည်။. ၎င်းသည် အရည်အဆင့် sintering အခြေအနေများအောက်တွင် အတော်လေးသန့်စင်သော ITO ပစ်မှတ်ကို ရရှိစေပါသည်။. ထိုမှတပါး, လိုအပ်သော အောက်ဆိုဒ်ကုန်ကြမ်းသည် နာနိုအမှုန်များ ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။, ၎င်းသည် ပဏာမလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေသည်။. ၌ 2000, အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကော်မရှင်, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း “လက်ရှိ ဦးစားပေး သတင်းအချက်အလက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း၏ အဓိက ကဏ္ဍများ လမ်းညွှန်”, ITO ၏ကြီးမားသောပစ်မှတ်ပစ္စည်းလည်းပါဝင်သည်။.
သိုလှောင်မှုနည်းပညာ, မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, စွမ်းရည်မြင့် ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်တွင် ဧရာမ သံလိုက်ဓာတ်အားဖြည့် ဖလင်ပစ္စည်းများ အများအပြား လိုအပ်သည်။, CoF~Cu multilayer composite film သည် ယနေ့ခေတ်တွင် အသုံးများသော magnetoresistive film structure တစ်ခုဖြစ်သည်။. သံလိုက်ဓာတ်ပြားများအတွက် လိုအပ်သော TbFeCo သတ္တုစပ်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကို ဆက်လက်တီထွင်နေဆဲဖြစ်သည်။, ၎င်းမှပြုလုပ်သော သံလိုက်ဓာတ်ပြားများသည် သိုလှောင်မှုပမာဏ မြင့်မားသည်။, အသက်ရှည်ပြီး အဆက်အသွယ်မပါပဲ အကြိမ်ကြိမ် ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။. ယနေ့တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော သံလိုက်ဓာတ်ပြားများသည် TbFeCo/Ta နှင့် TbFeCo/Al တို့၏ အလွှာပေါင်းစပ်ဖလင်ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသည်။. TbFeCo/AI တည်ဆောက်ပုံ၏ Kerr လည်ပတ်ထောင့်ရောက်ရှိသည်။ 58, TbFeCofFa နှင့်နီးကပ်နေချိန်တွင် 0.8. ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏ နိမ့်သော သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှု မြင့်မားသော AC တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လျှပ်စီးဗို့အား l လျှပ်စစ်အား ခုခံနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။.
Germanium ခနောက်စိမ်း telluride သည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုမှတ်ဉာဏ်များကို အခြေခံသည်။ (PCM) NOR အမျိုးအစား flash နှင့် DRAM စျေးကွက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် အစားထိုးမမ်မိုရီနည်းပညာအဖြစ် သိသာထင်ရှားသော စီးပွားဖြစ်အလားအလာများကို ပြသထားသည်။, သို့သော်, ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အရွယ်အစားချဲ့ထွင်ရန် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းအား ထပ်မံလျှော့ချရန်အတွက် အပြည့်အဝထုတ်လုပ်နိုင်သော hermetic cells များမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။. နိမ့်သော ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု ရေစီးကြောင်းများသည် မှတ်ဉာဏ်ပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။, ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပြီး ဒေတာ bandwidth တိုးမြှင့်ပါ။, ယနေ့ခေတ်ဒေတာဗဟိုပြုအတွက် အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်အားလုံး, အလွန်ခရီးဆောင်စားသုံးသူ
အကြို: မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း LCD ဖန်သားပြင်နယ်ပယ်တွင်သတ္တုမော်လီဘင်နမ်ပစ်မှတ်သည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ကပါဝင်သနည်း။